Margarekha थाहा पाउनु होस कुन देशका राष्ट्रप्रमुखको तलब कति ? – Margarekha
थाहा पाउनु होस कुन देशका राष्ट्रप्रमुखको तलब कति ?
अमेरिका, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, सिंगापुरलगायत विश्वका ठूला र विकशित देशका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको तलब कति होला ? सायद, यो जिज्ञासा जो–कोहीलाई लाग्न सक्छ । आर्थिक रूपमा समृद्ध यी ठूला देशका राष्ट्रप्रमुखको तलब नेपाली रुपैयाँमा धेरै देखिए पनि त्यहाँ चल्ने युरो र डलरमा हिसाब गर्दा निकै कम हुन्छ । मतलब, उनीहरूले राज्यबाट कम तलब बुझ्छन् । यस्तो छ केही धनी देशका राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको तलब :
१७ पुष २०७४, सोमबार ११:१७ प्रकाशित